Iindlela ezi-6 ezahlukeneyo zokudlala uMdlalo woBomi kwi-Intanethi - Ibhodi Igama Inkcukacha
Iindlela ezi-6 ezahlukeneyo zokudlala uMdlalo woBomi kwi-Intanethi
Umdlalo woBomi wadalwa nguMilton Bradley ngo-1860, kodwa uhlobo lomdlalo owaziyo namhlanje lwakhutshwa ngo-1960. Kumdlalo, abadlali badlula kwimicimbi yobomi enjengokufumana umsebenzi, ukuthenga indlu, ukuba nomntwana kunye nokuthatha umhlala phantsi. . Injongo yomdlalo kukuba yimpumelelo enkulu xa kufikwa ekusingatheni imiceli mngeni yobomi, kwaye iphele inemali eninzi. Imidlalo ekwi-Intanethi esekwe kuMdlalo woBomi ulandela isiseko esifanayo, kodwa inokubonelela ngemiceli mngeni eyahlukeneyo kunye neziganeko zobomi kunowona mdlalo webhodi.
Ukudlala phi kuMdlalo woBomi kwi-Intanethi
Ngelixa bekukho iinguqulelo ezahlukeneyo zoMdlalo woBomi wokudlala kwi-Intanethi, uninzi lwazo luye lwanyamalala. Ngethamsanqa kusekho into enokukhutshelwa yomdlalo kunye nezinye iindlela ezimbalwa.
Imidlalo yeBhodi eli-10 yezoQoqosho yoNwabo lwezeMfundo
Imidlalo yeBhodi eli-14 yeholide eqinisekisa ixesha elimnandi
Amacandelo e-Chess: Bajongeka kanjani
Yahoo! Imidlalo ibonelela ngeMidlalo yoBomi ngeempawu zeHasbro. Olu hlobo lukwi-Intanethi lomdlalo luyilelwe ukuba lube luhlobo olunxibelelanayo, loopopayi lwentsusa. Khetha ukudlala enye yeendlela ezimbini: ezakudala okanye ezandisiweyo. Kwimowudi yeklasikhi, ulandela umdlalo wokuqala kwaye ukhethe ukuthatha umhlala phantsi kwii-Millionaire Estates okanye kwi-Countryside Acres. Kwimowudi eyandisiweyo, unokhetho olwahlukileyo lokuthatha umhlala-phantsi, imidlalo ye-mini kunye nemiceli mngeni emitsha kuwo wonke umdlalo. Ngelixa umdlalo ubonelela ngamava oBomi kwi-Intanethi, awusimahla. Unokuzikhuphelela isilingo sasimahla somdlalo kwaye udlale ukuya kuthi ga kwiyure enye, okanye uthenge umdlalo ongenamkhawulo malunga ne- $ 20.
Umdlalo weeNkqubo zoBomi
Ukuba unayo i-smartphone okanye ithebhulethi, unokhetho oluninzi ngakumbi xa kuziwa ekudlaleni umdlalo.
Umdlalo woBomi uHlelo lwaKudala ngoBugcisa boMbane buguqula umdlalo kunye neziqwenga nge-3D oopopayi. Dlala ngokwakho okanye udlulise ifowuni okanye ithebhulethi yakho phakathi kwabahlobo kumdlalo wabadlali abaninzi. Inkqubo ye- Uhlobo lwethebhulethi yomdlalo ujolise kuyo ukuze ibekwe phakathi kwetafile kwaye idlalwe ngabadlali abane (omnye kwicala ngalinye) ngaphandle kokuhambisa ithebhulethi.
Umdlalo woBomi uHlelo oluZapped nguHasbro yinguqulelo epopayiweyo yomdlalo wokugqibela woBomi. Inika amanqaku emidlalo emininzi yokudlala kunye nebhodi yomdlalo eyilwe ngokutsha. Umdlalo ubonelela ngeendlela ezintsha kubadlali, njengokukhetha umtshato wesini esifanayo okanye ukukhetha isini somntwana kunokuba usinikwe ngokungacwangciswanga.
I-CD-ROM kunye neVidiyo yoMdlalo weVidiyo
Kuba ukhetho lwakho lokudlala uMdlalo woBomi kwi-Intanethi lilinganiselwe, jonga i-CD-ROM okanye uhlobo lomdlalo wevidiyo ngamava afanayo.
Hasbro Umdlalo woSapho woMdlalo woBusuku 3 ibandakanya uMdlalo woBomi ekukhetheni kwayo kwimidlalo yebhodi kwaye iyafumaneka kwi-Wii, Playstation kunye neXbox.
Ukuba unayo i-Gameboy Advance, ungayithenga Umdlalo woBomi njengenxalenye yepakethi yokudibanisa ekwabandakanya uYahtzee kunye noMhla wokuHlawula.
Dlala i Umdlalo woBomi kwiCD-ROM kwikhompyuter yakho. Gcina ukhumbula ukuba le nguqulo yomdlalo ifumaneka kuphela kwabo baqhuba iWindows Vista, i-XP kunye neenguqulelo zangaphambili zeWindows.
Ukudlala uMdlalo woBomi
Ukuba akukho nanye kwi-intanethi kunye neenketho ezisekwe kwikhompyuter ezihlangabezana neemfuno zakho, hlanganisa usapho kunye nabahlobo bakho kwaye ukhuphe umdlalo webhodi yeklasi. Nokuba uyidlala njani, uMdlalo woBomi longezo olukhulu kubusuku bosapho okanye indlela yokudlulisa ixesha ngemini enethayo.
Abantwana' Toys Izinja Nokuhamba Iphepha Lamaxabiso Antique Ufeng Shui Imiboniso Yesilayidi Igolide Izacholo
I-Trailer And Rv Camping
Iindonga E Ezomileyo Iindonga
Cat Expert Intliwanondlebe
inja ingatyi iveki
ungaqinisekisa njani umhla kunye nomfana ngombhalo
ungacoca njani ngaphakathi kwetaster
zincinci iindawo ezibuhlungu zokufumana iitattoos
itya ntoni ufudo ebhokisini?
San Francisco Bay Area Arts Usetyenziso Lwewindows Kwi- Ivenkile Yewindows
Iindidi E Peses